Manampahefana vaovao misahana ny fizahan-tany i Martinique
Home » Travel Associations News » Manampahefana vaovao misahana ny fizahan-tany i Martinique
François Baltus-Languedoc no nanendry ny Tale Jeneralin'ny New Martinique Tourism Authority
The Fahefana misahana ny fizahan-tany Martinique nanambara ny fanendrena an'i François Baltus-Languedoc ho CEO an'ny MTA.
Ny iraka Andriamatoa François Baltus-Languedoc izay eo ambany fitantanan'ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique dia hamolavola sy hampihatra paikady vaovao hampivoarana ny antso ho amin'ny toerana haleha, na eo amin'ny lafiny fampiroboroboana ny tsena iraisam-pirenena, ary koa ny fampiroboroboana ny tolotra fizahan-tany any Martinika .
Vonona handray an'io fanamby vaovao io Andriamatoa Baltus-Languedoc nilaza hoe: "Faly aho fa misolo tena faritra iray izay tena tiako sy tiako be". Notohizan'Andriamatoa Baltus-Languedoc: "Betsaka ny zavatra atolotry Martinique ary voninahitra ho ahy ny mandray anjara amin'ny fampandrosoana ity toerana mahafinaritra ity noho ny toerako vaovao."
Nanana andraikitra maro isan-karazany teo amin'ireo vondrona iraisam-pirenena malaza * nandritra ny 25 taona niarahany tamin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana sy ny fandraisam-bahiny iraisam-pirenena, Andriamatoa François Baltus-Languedoc dia manana fananana maro hahombiazana amin'ity fanamby vaovao ity:
• Fahaizana amin'ny tetika fizahan-tany,
• Fanandramana amin'ny fizahan-tany fizahan-tany,
• Fahitana manerantany momba ny sehatry ny hotely avo lenta sy avo lenta,
• Fahalalana lalina momba ny tsena ho an'ny daholobe (Amerika Avaratra sy Eoropa) ary ny tsena mety hitranga (Amerika Latina, Azia atsimo atsinanana) an'ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique
Karine Mousseau, Kaomiseran'ny fizahantany any Martinique dia naneho hevitra hoe: "Miaraka amin'ny fahaizany sy ny traikefany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, resy lahatra aho fa miaraka amin'ireo ekipan'ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique ary na ireo matihanina amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina, Atoa Baltus-Languedoc dia afaka hamolavola paikady manavao sy an-tsaina hampandrosoana ny indostrian'ny fizahan-tany an'i Martinique. ”
Hihaona amin'ny indostria any Montreal Andriamatoa François Baltus-Languedoc ary New York faran'ny volana oktobra.
IATA: Ny ady ara-barotra any Etazonia sy Sina dia mavesatra amin'ny entan'ny rivotra
Manam-pahaizana momba ny teknolojia ambony sy marika fitsangatsanganana no mizara fahitana ao amin'ny Travel Forward